नेपालमा कोरोना मा’हामा’रीले लियो ड’रलाग्दो रुप, घट्यो पत्याउनै नसकिने घट्ना ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालमा कोरोना मा’हामा’रीले लियो ड’रलाग्दो रुप, घट्यो पत्याउनै नसकिने घट्ना !
काठमाडौँ,असार ६- नेपालमा कोरोनाको कहर बढीरहेका बेला कास्कीका एक १९ महिने शिशुमा कोरोना संक्रमण फेला परेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकामा १९ महिने शिशु र अर्का ४१ वर्षीय पुरुष रहेका छन् ।
भारतमा रहेका शिशुका बुबा केही दिनअघिमात्रै गाउँ आएर सिधै क्वारेन्टाइनमा बसेका र आमाले लकडाउन सुरु भएदेखि नै गाउँ नछोडे पनि ति शिशुमा कोरोना देखिएसँगै गाउँमा नै खैलाबैला सुरु भएको छ ।
शिशुका हजुरबुबा आना लिएर क्वोन्टाइनमा गएको आधारमा परिवारकै स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना स।क्रमण देखिएको मादी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । मादी गाउँपालिकाका अर्का कोरोना संक्रमित ४१ वर्षीय पुरुष २२ दिनअघि भारतबाट गाउँ फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए ।
यो पनि ,काठमाडौ- हालै सामाजिक संजालमा एक अनौठो बच्चाको जन्म भएको छ । देख्दा दुरुस्तै डल जस्तो देखिने यो बच्चको आकार डमि जस्तै रहेको छ । बच्चाको जन्म लगत्तै सामाजिक संजालमा भाइर भएको यो बच्चाको जन्म अमेरिकामा भएको हो । जब कुनै एउटि महिला आमा बन्छे उसलाई संसारकै धेरै खुुशी लाग्ने गर्दछ ।
अमेरिकामा यो बच्चाको जन्म त भयो तर उसको नाक नभएको सन्तान जन्मेपछी बुबा आमालाई पनि अनौठो लाग्यो । उक्त बच्चको नाम एलि थाँमसन रहेको छ ।
जब बच्च रुन खोज्छ तर उसको आवाज भने आउदै यो देखेर आमा बाबुको आँखामा आशु थामिएनन् । यसलाई सास फेर्नको लागी घाटीमा प्वाल बनाइएको संचार माध्यमले जनाएको छ । कंजेटियल हर्निया नामको रोगबाट पिडित रहेको यो बच्चा निको हुन निकै समय लाग्ने बताइएको छ ।
केहि समय पहिले समाचारमा मात्र आएपनि अहिले भिडियो नै आएको छ । उक्त भिडियो धेरैले हेरिसकेका छन् । रधेरे मानिसले फरक फरक किसिमका कमेन्ट पनि गरेका छन् ।
भारतले नेपाललाइ दियो ९६ करोड भारु सहयोग
नेपालले टिस्टादेखि काँगडासम्म लिन सक्छ भन्दै भारतमा खैलाबैला, विज्ञ पत्रकारको यस्तो छ राय